ဗမာပြည်မှာဆရာဝန်လာဖြစ်တာကံကောင်းတာပဲ Part-II | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ဗမာပြည်မှာဆရာဝန်လာဖြစ်တာကံကောင်းတာပဲ Part-II
Posted by Foreign Resident on Aug 23, 2011 in Community & Society | 8 comments
This article is the further imagination & explanation.
” ဒါတောင် သင်ကြားရတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ခြင်း တက်တက်စင်အောင် ကွာခြားတာမဟုတ်ဘူးနော် … ဒီကလူတွေ တခြားထွက် အလုပ်လုပ်လည်း … ၀င်ဆံ့ကြတယ် ”
In fact, it is not right.
Syllabus ( သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ), teaching techniques, practices & ideologies are different now.
Myanmar Doctors who came & tried for Foreign (Doctor) Exam,
are well prepared for this exam &
generally, they are the bests ( at least top 20% ) of Myanmar Doctors.
Even that, unfortunately, only around 70% can pass the exam.
Other 30% changed their profession (not became foreign recognized doctors).
There are many Myanmar Doctors in Australia, who did not pass the AMC exam.
Moreover, I am very regret to inform that,
Foreign Myanmar Doctors know ( but, they will not say it out loud )
Most of the Doctors in Myanmar are not competence enough.
( I mean, up to the level of internationally recognized/accepted )
They met & talked with “their friends”. ( Doctors in Myanmar )
( “their friends” generally refer to FRCP & FRCS,
they don’t want to mention about ordinary doctors, sorry )
After conversation with “their friends”,
It seems, “their friends” are not updated their medical knowledge
after their fellowship ( FRCP & FRCS ).
they were clever and competence when they got their FRCP & FRCS
( we have no doubt about that ).
May be, their friends were busy finding money alone &
their times were occupied for this money finding purpose only.
So, they don’t have enough time to update their medical knowledge.
But, in this ever-changing era/world,
Today truth may become tomorrow fault.
So, if you are not refreshing yourself regularly,
Then, you may become incompetent.
Every registered doctors need to replenished/update their medical knowledge,
otherwise, their registration will be cancelled. ( by Law )
( eg, they need to attend conference, refresher courses or attain diploma )
Every years, they need to get at least 15 points from this refresher courses.
If they cannot prove their points, their registration will be cancelled.
The worst one is ideology,
Our old tradition overly respected to Doctors.
( They were the best intelligent people of Myanmar,
But, it is the past & not now )
Our general populations are poor, unintelligent & unaffordable to dear medical costs.
Then, Doctors think their selves as “ဆရာကြီး” & “ကျေးဖူးရျင်”
“In fact, ဆရာဝန်တွေ ကျောင်းဆရာတွေဟာ
မိမိရဲ့ အသက်မွေးမှုတာဝန်ကို ကိုယ့်ဘာသာ ကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်နေကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
အဲဒီအပေါ်မှာ အလကားနေရင်း ကျေးဇူးတင်ခံထိုက်တယ် ဆိုတဲ့ အမြင်ကြီးကို စွန့်လွှတ်သင့်တယ်”
In developed country,
to give good care,
to give full information,
to get the patient’s consent &
make everything in transparency.
( otherwise, you will be punished )
Doctors are not “ဆရာ”
They are barely expert in their field &
give “medical service” & in return take “money”.
Patients are their “customer” &
necessary to give full respect to those patients.
( Don’t forget, “ customer is right & customer is god ” )
ကျေးဇူးတင်ခံထိုက်တယ် ဆိုတဲ့ အမြင် = some form of arrogant
If you treat the patients with “real good deed”,
you can have not only the money,
but also “Ku tho” & personal satisfaction.
( eg, Teacher profession may have same privilege,
but, unfortunately, Soldiers profession may not have that chance )
You see, whatadecent profession,
let say, it isagreat privilege to beaDoctor !!!
If I wereadoctor,
I will not ask any more like ” ကျေးဇူးတင်ခံထိုက်တယ် ”
Please be satisfy my fellow doctors.
“Ku tho” & personal satisfaction are more than enough.
ကိုနိုင်ငံခြားသားကြီးရယ် … ကျွန်မတို့ နိုင်ငံက ဆရာဝန်တွေ …သူများနိုင်ငံမှာ သွားအလုပ်လုပ်နေတာ တပုံကြီးပါ … ။ ဆရာဝန်တင်မကဘူး … နပ်စ်တွေတောင် US နဲ့ EUROPE တွေထိ ၀င်ဆံ့နိုင်ကြပါတယ် …ဒီမှာသင်ထားတဲ့ ပညာကို ဟိုမှာ နည်းနည်း ထပ်ပြီး မွမ်းမံသင်တန်းလေးတွေ ထပ်တက်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့ … လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝ နားလည်အောင်ပါပဲ … ။ ဟိုနိုင်ငံက စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေရဲ့ အသုံးပြုပုံလေးတွေလောက်သာ ပိုလေ့လာရတာလေ … ။ သူများနိုင်ငံက စက်ပစ္စည်းထွန်းကားတယ်လေ … ။ (ဒီနိုင်ငံက တချို့ ဟောက်ဆာဂျင်လေးတွေ အီးစီဂျီစက် အသုံးပြုပုံကို အေအက် တစ်ယောက်ကလုပ်ပြမှ ပြူးပြဲ လိုက်ကြည့်ရတာ.. )
တခြားနိုင်ငံတွေတော့မသိဘူး europe မှာတော့ … ဒီနိုင်ငံက ဆရာဝန်လုပ်မယ်ဆိုလျှင် … ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေရတယ် … ။ စာမေးပွဲအောင်တာနဲ့…သူတို့ဆီက ဆေးရုံတစ်ခုမှာ … နေစရိတ် ၊ စားစရိတ် အပြီးငြိမ်းအလုပ်ရတယ် … ။ ဒါတောင်မှ ဒီက အစိုးရလစာပဲယူပြီး … ထမင်းကြမ်းယပ် ခတ်စားမယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးကလည်း ရှိသေးတယ် ….
ကျေးဇူးခံထိုက်တယ်ဆိုတာ … လူနာရှင်တွေက သက်မှတ်တာပဲလေ … အဲ့ဒီအပေါ်မှာ … ဆရာဝန်က ဘ၀င်မြင့်သွားစရာမှ မရှိပဲ …. ။ ကိုယ်စေတနာနဲ့ လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ အလုပ်တစ်ခု အဆင်ပြေသွားတယ် ၊ အားလုံး ကျေနပ်သွားတယ်ဆိုတော့ .. ၀မ်းသာစရာပါပဲ ….
အမှုကိစ္စတခုဖြစ်တော့ အသိတွေက အကြံပေးလို့ ရှေ့နေတွေမေးကြည့်ပါတယ်။ ဘာစကားမှ မပြောရသေးခင် အကြံပေးခ ဘယ်လောက်ယူပါတယ်ဆိုတာက စပြောတယ်။ သူတို့ပေးတဲ့အကြံတွေကလည်း တကယ့်အကျန်တွေ၊ တစ်ယောက်ပြော တမျိုးနဲ့ သုံးစားလို့ မရဘူး။ အဲဒီထဲက တယောက်ကိုပဲ ခေါ်ဖြစ်တော့လည်း ကိုယ့်ကိုပဲ ပြန်ဖြဲချောက်နေတာ။
ဟိုးးးးး အရင်က- အဖေ့မိတ်ဆွေ ရှေ့နေကြီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တော့ အဲဒီအကြောင်း ပြောပြတယ်။ ကိုယ်က ဥပဒေတွေကို နားမလည်တော့ ရှေ့နေတွေက ဒုက္ခပေးတာ ခံရတယ်ဆိုတော့- အဲဒီ ရှေ့နေကြီးက “အမှုသည်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိစ္စမှာ ကိုယ့်ကိုယ်စား အကျိုးဆောင်ပေးဖို့ ဥပဒေနားလည်တဲ့ ရှေ့နေငှားတာပေ့ါ။ ကိုယ်ကသာ ဥပဒေနားလည်နေရင် ရှေ့နေကို ဘယ်ငှားပါ့မလဲ။ ရှေ့နေဆိုတာကလည်း ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ ဥပဒေပညာနဲ့ အကျိုးဆောင်ပေးဖို့ အကျိုးဆောင်ခယူတာ မဟုတ်လား။ အကျိုးဆောင်ခယူတယ်ဆို အလုပ်ပြန်လုပ်ပေးရမှာပေ့ါ။” တဲ့လေ။ သူတို့ခေတ်မှာ ချိန်ဘာဆင်းတော့ သူတို့ဆရာက ဥပဒေပညာသာမက အဲဒီလိုတွေလည်း ဆုံးမစကား ပြောပေးတယ်ဆိုပဲ။
ဘယ်နေရာမဆို တန်ရာတန်ကြေး ယူပြီးရင် အလုပ်တခု ပြန်လုပ်ပေးရမှာ တာဝန်ပေ့ါ။ ခုတော့ အဲလိုတွေ မရတာ ထုံးစံလို ဖြစ်နေကြတော့ ရလိုက်ရင်ပဲ ကျေးဇူးတင်နေပြီ။
ဟိုးအရင်တုန်းက ဘဲ ဆရာဝန်ဆိုရင် ပညာတတ်ကြီးတွေပေါ့–အားလုံးသူတို့ သိသူတို့ တတ်ပါတယ် လို့ အင်မတန်ရိုးအကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားကိုးအားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်လဲဟုတ်မှန်ခဲ့ကြပါတယ်။ခုခေတ် ဆရာဝန်တွေကတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဆရာဝန်ပေါက်စ ထောင်ခြောက်လ လို့ ဘဲပြောရမလိုဖြစ်နေပါပီ။တကယ်တော့ —-မြန်မာပြည်ရဲ့ ပညာရေးစနစ်ကျဆင်းလာမှု က တရားခံဘဲထင်ပါတယ်
မြန်မာပြည်မှာ ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ဖို့ ပုံမှန် ခုနစ်နှစ်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်။ဒါပေမယ့် ဂျီပီ ဖွင့်လို့ ကတော့ လက်ဖက်ရည်ဖိုးတောင် နပ်မမှန်ပါဘူး။ပညာသင်စရိတ်လေး ဆေးဖိုးနဲ့ ဝါးခမှာ ဆေးဖိုးတောင်အနိုင်နိုင်ရယ်။ဝါးခ ကတော့ ဝေလာဝေးပါ။ခက်နေတာက ဟိုးအရင် ကျွန်မတို့ ဆယ်တန်း(ယခု တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း)အောင်ပြီးရင် ဆေးကျောင်းကိုခေါ်တာတစ်နှစ်မှ အယောက်၂၀၀ပါ။ဆေး၁၊ဆေး၂၊ဆေး မန်း ကျောင်းသုံးကျောင်းဘဲရှိသေးတာ။ခုတော့ တစ်နှစ်ကို ၂၄၀၀လက်ခံပြီးသင်နေတာ။ကျောင်းကလေးကျောင်း ပူစပ်ပူလောင် မကွေးမှာ တကျောင်းတိုးလာတယ်လေ။နောက် စစ်ဆေးဆိုလား တကျောင်းရှိသေးတယ်။ဘာတွေ သင်လဲ တတ်ရောတတ်ရဲ့ လားမမေးနဲ့မေးတဲ့လူနဲ့ ဘာဆိုင်သလဲ ပြန်စစ်ခံရလိမ့်မယ်။ဟူးးးးးး. မောလိုက်တာနော် တော်ပါပီ. ပြောချင်တော့ဝူးးးး
အမှန်ဆုံးပါပဲ. .အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမြင်မကြည်နေတာကြာပြီ
ပေစုတ်စုတ်လေးရေ. ခုတော့ တော်တော်လေး ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ဖျက်မှုနည်းလာတယ်ပြောရမှာပါ။ဟိုးတလော ကညီမလေး ရွှန်းလဲ့ရည် ကိစ္စဖြစ်ပြီးကတည်း ကမပေါ့ဆရဲ ကြတော့ဘူး။ဒါက အလားအလာကောင်းလေးမို့ ကြိုဆိုသင့်တယ်မထင်ဘူးလား
ဟုတ်ပါ့ဗျာ ကြိုဆိုသင့်ပါတယ် ကောင်းတဲ့အလားအလာပါပဲ…
မီဒီယာက လွတ်လပ်ခွင့်ပိုရလာတော့ တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ အမှားတွေမကျူးလွန်ရဲကြတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြောလို.ရတယ်ဆိုပြီး ဆရာဝန်တွေအားလုံးလောက်ကိုသိမ်းကျုံးပြီးတော့လဲ မပြောစေချင်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာက ပုဂ္ဂိုလ်ခင်မှတရားမင်ကြတာလေ တကယ်စေတနာကောင်းတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းအများကြီးပါ ။မီဒီယာတွေကြောင့် ပြည်သူက ဆရာဝန်တွေအပေါ်မှာ ပြည်သူကမြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းသွားရင် ဆရာဝန်လူနာဆက်ဆံရေးပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပျက်သွားရင် ကုသရေးမှာအောင်မြင်ဖို.မလွယ်ပါဘူး။ မြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာနိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးဆေးကုနိုင်လောက်အောင်ချမ်းသာတဲ့လူ အများကြီးမရှိပါဘူး ။အများစုက ဆင်းရဲသားတွေများပါတယ်။ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေကိုကုပေးနေရတာကလည်းမြန်မာပြည်ကဆရာဝန်တွေပါပဲ ။ နိုင်ငံခြားကိုဆေးသွားကုနိုင်အောင်ချမ်းသာတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ကိုယ်ကြိုက်တာကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ မသွားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ မီဒီယာတွေကြောင့် ဆရာဝန်တွေကို အယုံအကြည်မရှိဖြစ်ပြီး ဘယ်ဆရာဝန်ဆီမှ မသွားချင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားမှာစိုးမိပါတယ် ။ အဲဒါဆို အဲဒီလူနာပဲနစ်နာရမှာပါ ။ မီဒီယာတွေကလည်းထိမ်းထိမ်းသိမ်းသိမ်းလေးရေးစေချင်ပါတယ်။